February 2011 – Everybody Read TChen
တကယ်တော့ ကိုယ် သိပ်သိပ်…
ဖုန်းသံ မြည်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တို့ စိတ်ထဲမှာ “သူ” ဆက်လာတာမှန်း သိရက်နဲ့ ဖုန်း ကိုချက်ချင်းကောက်မကိုင်ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ၁ ကနေ ၁၀ အထိ အရင်ရေပါတယ်၊ ပြီးတော့မှ ဖုန်း ကို ကောက်ကိုင်ပြီး ပုံမှန်လေသံဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီးထူးပါတယ်။ ကို်ယ်တချိန်လုံးလိုလို ဖုန်းဘေးမှာ ထိုင်စောင့်နေတယ် လို့ သူ့ကို မသိစေချင်ပါဘူး။ ဖုန်းခွက်ကို ကိုင်ပြီးတဲ့ အခါကျမှ ပုံမှန်လေသံ နဲ့ …
တကယ်တော့ ကိုယ်က သူနဲ့တွေ့ရတာ ပျော်ရွှင်လွန်းလို့၊ ဝမ်းသာလွန်းလို့ သိပ်သိပ်…ဟန်ဆောင်နေရတာပါ။
နောက်တခါများကျရင် ကိုယ်က သိပ်စိမ်းကား အေးစက်တာပဲလို့ သူထင်မြင်မိရင်… တကယ်တော့ ကိုယ်ဘယ်လောက်တောင်မှ သူ့အပေါ် သိပ်သိပ်…သိပ်သိပ်…အလေးထားတယ်ဆိုတာ သူ့ကို သိစေချင်ပါတယ်လေ။
Posted on February 16, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး1 Comment on တကယ်တော့ ကိုယ် သိပ်သိပ်…
ရှိသေးတယ်…သူသိပ်ချစ်လို့အလိုအရမ်းလိုက်ထားတဲ့ ခွေးလေး၊ မတည့်လို့ဆိုပြီး ချောကလက်မကျွေးဘူး။ ရတယ် ရတယ် သူမသိအောင် ခွေးလေး ကိုချောကလက်တွေ တပြုံတမကြီး ကျွေးလိုက်အုံးမယ်။ သူ ရင်နာ စိတ်နာပြီး သေပစေ…လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး။
ဒီနေ့ သူကတိအတိုင်း ကိုယ့်ကို အဖော်မလုပ်ပေးဘူး။ ကိစ္စမရှိဘူး။ ရတယ်၊ နောက်တရက်လောက်ကျရင်လဲ ကိုယ်ကလဲ ပြောထားပြီး ချိန်းထားပြီးတော့ တမင် ကို မေ့ပစ်မယ်။ ပြီးတော့ လှလှပပလေး ဝင်စားဆင်ယင် ပြင်ဆင်ပြီးတော့ သူ့ကို ခနဲ့တဲ့တဲ့ နဲ့ “ ဟွန်း ဒီလောက်ကြီးတဲ့ လူတယောက်တောင်ဖြစ်နေပြီ…. ကိုယ့်ဘာသာ အကြောင်းအရာလေး ဘာလေး ရှာပြီး မနေတတ်ဘူးလား” လို့ပြောလိုက်အုံးမယ်။ ပြီးမှ ပိုက်ဆံအိတ် နဲ့ တကိုယ်လုံး ရှိရှိသမျှတွေ ကိုအကုန် ခါပြီး ကော့ကော့ ကျော့ကျော့လေး ထွက်လာမယ်။
သူ ကိုယ့် ကို ပေယျလကန် လုပ်တုံးက၊ ပစ်ပစ်ခါခါ ထားပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ သွားတုံးက သူ့အပြစ်တွေ ကိုတွေးတွေးပြီး သူကို ပြန် လက်စားချေရတာတွေဟာ အရသာရှိသလောက် သူကိုယ့် အပေါ် ပြန်ကောင်းတဲ့ အခါ ပြန်ချော့တဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်ရှိသလို ခံစားရတာကတော့ ဘာလို့များလဲ…..။
Posted on February 14, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါးLeaveacomment on လက်စားချေမှု သေးသေးလေးတွေ
Some pills for me??? take some pills
……so no hanging
BETTER A Chen 12:04 PM 9th Feb 2011 Wednesday Bangkok
Posted on February 11, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများLeaveacomment on Some pills for me???
မချက်ခင် ပထမပြင်ဆင်တဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင်နော်…..
တဘက်ကလဲ ခုနက ကြက်သွန်ဖြူနီ နဲ့သတ်ထားတဲ့ ဆီထဲကို ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့်ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီး ထည့်ပြီး ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ခရမ်းချဉ်သီး အနည်းငယ် နူးတဲ့ အထိ ကြော်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဆီသတ်ထားတဲ့ အနှစ်ကလဲ ရယ်ဒီပဲ ဟင်းရည် ကလဲ ရယ်ဒီပဲဆိုရင်တော့ ဝမ်းတူးသရီးလို့သာ တိုင်ပင် ပေးပြီးတော့ ဟင်းရည်ထဲကို ဆီသတ်အနှစ်တွေရောထည့်လိုက်ပေတော့။ ပြီးရင် ဆား အချိုမှုန့်စတာတွေကို သင့်အောင် ထည့်ပါ။ တချိန်တည်းမှာဘဲ စစကနဦးက အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ပဲပုပ်အမှုန့် ကိုထည့်ပါမယ် သင့်တော် သလိုချိန်ဆထည့်ပါ အရသာ အပေါ့အလေး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့။ တခုပဲ မှာချင်တယ် ပဲပုပ်တွေအများကြီးမထည့်ပါနဲ့ သွေးတိုးရင် တီတာဝန်မယူနိုင်ပါဘူး။ နောက်မှ မပြောဘူးမပြောနဲ့နော်။ တရုတ်စကားပုံရှိတယ် “ပြဿနာ ဆိုတာ ပါးစပ်ပေါက်ကပဲ ထွက်တတ်သလို အနာရောဂါ ဆိုတာလဲ ပါးစပ်ပေါက်ကနေသာ ဝင်လာတတ်ပါသတဲ့” (ဆိုလိုတာကတော့ စကားရှုပ်ရင် ပြဿနာ တက်တတ်သလို အစား မဆင်ခြင်တာကြောင့် လဲရောဂါဘယ ထူပြောတတ်တာ ကိုပြောချင်တာပါ) ရှေးလူကြီးစကား အလေးထားနော်….
နောက်တော့ မှ ဟင်းရည် ပွက်ပွက်ဆူပြီ ဆိုရင် အိုးချခါနီးကျတော့ မှ ဆူးပုပ်လေးတွေ အုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲ့တာဆိုရင် အင်မတန်မှ အရသာရှိတဲ့ ပိန္နဲသီး ဝက်နံရိုးဟင်းရည် ရှမ်းစတိုင်လ် တခွက် ရပြီပေါ့နော်…
ဒီလိုလေး သပ်သပ်ထည့်ပြီး ထမင်းနဲ့ ဆွဲလို့ ရသလို တီ့လိုမျိုးလဲ ထမင်းထဲ တခါတည်း ဆမ်းပြီး အပျင်းစားနည်း စားလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်လိုစားစား အိုအီရှိ ဖို့ ကသာ အဓိကလေနော်……….
Posted on February 2, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်11 Comments on ရှမ်းတို့ အကြိုက် တီ့ အကြိုက် ဝက်နံရိုး ပိန္နဲသီး ဟင်းရည်